सुपा देउराली को दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस हजुरको मनोकामना पूरा हुनेछ – Bestnewsinfo
सुपा देउराली को दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस हजुरको मनोकामना पूरा हुनेछ
No Comments on सुपा देउराली को दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस हजुरको मनोकामना पूरा हुनेछ
वि.सं. २०७७ भदौ १४। आइतवार। इ.स. २०२० अगस्ट ३०। ने.सं. ११४० ञलाथ्व। भाद्र शुक्लपक्ष। द्वादशी, ०८:५४ उप्रान्त त्रयोदशी।
परिस्थितिवश आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। अस्वस्थताले काममा जुट्न बाधा पर्नेछ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ। हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भाग्यले साथ दिनेछ। धेरै आम्दानी नभए पनि व्यवसाय सामान्य रूपमा चल्नेछ। शुभचिन्तकहरूले आफ्ना कमजोरीप्रति गुनासो गर्न सक्छन्।
व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने समय छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। खर्च लागे पनि दिगो काम फेला पर्नेछ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ। पहिलेका सम्झौता तोड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर अरूको भरले मात्र काम नबन्न सक्छ। उधारोमा व्यापार गर्नुपर्ला। चुनौती पन्छाउँदै रोकिएका काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। केही विवादास्पद जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ला।
तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ। धेरै लाभ उठाउन नसकिए पनि समस्या सुल्झनेछन्। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन्। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा अवश्यै लाभ हुनेछ।
अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञान र कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यापार र पेसाबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। मिहिनेतले पेसागत उचाइमा पुर्याउन सक्छ। गुमेको स्थान प्राप्त हुनाले आफ्नो वर्चस्व पनि बढ्नेछ।
खर्च लागे पनि लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। दिगो योजनाका लागि ऋण लिने समय छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपरे पनि उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ। तर सानो कामलाई अधिक समय खर्च हुनेछ। बेसुरको निर्णयले पछिलाई समस्या पर्न सक्छ। छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्नेछ। केही आफन्त पनि टाढा हुनेछन्।
← परिवार र आफन्त सम्पर्कमा नआउदा संक्रमितको शव चार दिनपछि उठ्यो → महिलालाई विवाहपछि हुनेछ यस्ता ५ कुराको पछुतो